Vina fisandratana 1
Mponina 25 tapitrisa/ Firenena 1
Hambom-pirenena iombonana / tendron’ny fivoarana 4
Tolo-kevitra 50 hampivoarana an’i Madagasikara
« Fisandratana 2030 no motera ho
an’ny fiarahamonina malagasy vaovao »
PEJY VAOVAO HO AN’NY TANTARA MALAGASY
« Fisandratana 2030 » dia natomboka tamin’ny 2016 ary mamaritra ny vina fampandrosoana irina ho an’i Madagasikara amin’ny taona 2030 sy manondro ireo fanoitra ahafahana manatanteraka izay fanamby izay. Novolavolaina tamin’ny alalan’ny fahaiza-mitarika malagasy sy tamin’ny alalan’ny fakan-kevitra ifotony manerana ny Nosy ary koa fanambarana ireo vokatra azo tany amin’ny departemanta ministerialy isanisany, izany dia manamarika ny famerenana ny finiavana politika sy ny fitantanana ho an’ny tombontsoan’ny olompirenena. Asaina ny vahoaka malagasy handray antanana ny hoaviny sy handrafitra ny ampitso mendrika kokoa na ho an’ny tanorany na ho an’ny vahoaka tsy ankanavaka.
HERY 7 MIANTOKA NY FANDROSOANA
Ny fambolena manome vokatra ho sakafo sy ny fiompiana
Vary, katsaka, siramamy, voankazo, legioma ary hen’omby
Madagasikara amin’ny taona 2030 dia ho sompitry ny Ranomasimbe Indiana
Ny tataom-bidy azo amin’ny fambolena sy fiompiana dia hitombo avo dimy heny ka hahatratra 30%-n’ny harin-karena faobe ary hiteraka asa 1 500 000 isa eo ho eo.
Madagasikara dia hahatanteraka ny revolisionina ara-pambolena sy fambolena mitodika amin’ny indostria, ka tena manatsara ny fidiram-bolan’ny tantsaha ary mitarika ny fihenan’ny fahantrana.
Lamba, indostria manodina vokatry ny fambolena, hoditra, kiraro, ary indostria fanambarana
Amin’ny 2030, Madagasikara dia ho faritra mavitrika ara-indostria, « Shenzen » aty Afrika.
Raha ampitomboina avy 10 heny ny tataom-bidy ny fandraisana anjaran’ity sehatra ity eo amin’ny harin-karena faobe dia ho lasa 10% amin’ny 2030 raha toa ka 4% izany izao ary hiteraka asa 1 000 000 isa. Ny vina 2030 izany dia mampiseho fanamby goavana ara-indostria ka ny tanjona dia hiteraka asa 1 tapitrisa isa ary mifototra amin’ny akora fototra, ny fahaiza manaon’ny olona sy ny fisian’ny tsenam-paritra goavana.
Ny jono sy ny
Trondro, harena anaty ranomasina
Madagasikara amin’ny 2030 dia ho tompondakan’ny toekarena manga.
5%n’ny harin-karena faobe ho an’i Madagasikara dia hitombo avo 5 heny ka hahatratra 8%-n’ny harin-karena faobe amin’ny 2030 ary hiteraka asa 350 000 isa.
Ny sehatry ny jono dia harindra tsara kokoa sy homen-danja kokoa ny eo antoerana ary
Manitatra ireo tsena fanondranana entana ao anatin’ny fanajana ny tontolo iainana anaty ranomasina.
Ny vokatry ny fambolena sy ala tsy fahita firy
Vokatra fihinana, fikojakojana ny endrika amam-bika sy fanafody ao anatiny ny lotisia, loha menaka ary ny zava-manitra fanao amin’ny sakafo : lavanila, jirofo, dipoavatra, sakamalaho, tamotamo, kafe, kakaô ary ny kanelina.
Amin’ny 2030 Madagasikara dia hanolotra ho an’izao tontolo izao ireo vokatra sarobidy azo avy amin’ny harena voajanahary.
5%-n’ny harinkarena faobe raha toa ka 3% izany izao 2018 izao ary hitombo avo enina heny ny tataom-bidy.
Madagasikara dia hanome lanja tanteraka ireo zava-maniry saro-tadiavina azo avy amin’ny harena voajanahary fa indrindra tena tilian’ny tsena iraisam-pirenena ao amin’ny fitsaboana amin’ny alalan’ny hanitra, ny fikojakojana ny endrika amam-bika ary ny fanamboarana fanafody.
Ny indostria fitrandrahana
Harena ankibon’ny tany indostrialy sy akoranafo
Madagasikara amin’ny 2030 dia ho mpandray anjara matanjaka eo amin’ny tsena iraisampirenena momba ny harena ankibon’ny tany (metaly sy metaly sarobidy)
Amin’ny 2030, ny harena ankibon’ny tany indostrialy sy akoranafo dia hahatratra 8%n’ny harinkarena faobe raha 2% ankehitriny. Hitombo 18 avo heny ny tataom-bidy ary hamorona asa 400 000 isa.
Hanome lanja sy hanovaova ny Harena ankibon’ny tany indostrialy sy akoranafo ny firenena ao anaty ny politika fitantanana maharitra
Ireo karazam-bato sarobidy
Madagasikara amin’ny 2030 dia ho lasa mpandray anjara amin’ny fanodinana ny vato sarobidy.
Madagasikara dia hanjary ivontoerana fitaratra eo amin’ny tsena iraisampirenena momba ny vatosoa sy ny vato sarobidy ary hiantoka ny fanodinana azy ireo eto an-toerana. Ity sehatra ity izay tsy mitondra afa-tsy latsaky ny 1%-n’ny harinkarena faobe dia ho tafakatra 2% amin’ny 2030 sady hamorona asa 350 000 isa.
Fizahatany mikajy ny tontolo iainana, mahasondriana/ranomasina, fivoriana/valan-dresaka, fihariana sy famangiana fianakaviana.
Amin’ny 2030 dia ho isan’ny toerana fizahan-tany malaza sy be mpitia indrindra maneran-tany i Madagasikara.
Madagasikara dia hanan-danja, matanjaka sy miavaka eo amin’ny sehatry ny fizahan-tany eran-tany amin’ny alalan’ny zava-boary voaaro. Ny fizahan-tany dia hitondra 4 miliara dolara isan-taona sy mpizahatany 1.000.000, izay isahana 10%n’ny harin-karena faobe sy asa 500.000 isa.
Amin’ny 2030, ankoatran’ny fisondrotana sy ny vola miditra, Madagasikara dia iantoka ny filaminan’ny mponina ao aminy miaraka amin’ny fivoarana ara-materialy sy ny hafa. Hiverenana hiainana izany fihavanana malagasy izany.
FANTARO FISANDRATANA 2030
SINTOMY NY VINA FISANDRATANA 2030
SINTOMY NY TAKELAKA FISANDRATANA 2030